Kutengeswa kwe "kugadziridzwa" iPhone kuri kuwedzera uye kunokanganisa matemu eApple | IPhone nhau
Kutengeswa kwe iPhone "kugadziridzwa" kuri kuwedzera uye kunokanganisa zviteshi zveApple
MuSpain isu tine zvakawanda zvekusaziva nezve izvo zvinogadziriswazve terminal in Apple nharaunda. Zvakawanda zvekuti vashandisi vazhinji vanogamuchira chinongedzo chine zita iri pavanoenda kunogadziriswa muApple Chitoro vanonyunyuta pasina kunonoka.
Nekudaro, chii chevashoma chinoita kunge dongo rekupedzisira, kune vamwe vazhinji iwo mukana wakasarudzika. Aya ndiwo marongero emusika eakagadziridzwa maTerminal terminals akakura kupfuura nakare kose, kuita izvi zvishandiso zvinokwezva kune avo vasina kumbozvifunga.
Izvo zvakakosha kuti uzive kuti iyo Cupertino kambani inonzwisisa nekugadzirisa kana kudzoreredza chishandiso chakatambura chakasarudzika kugadzira kukanganisa uye kuti nekugadzirisa kudiki inokwanisa kuchengetedza zvese zvemhando zvinodzora zvinoiswa nekambani pamberi pekutengesa kwechero chishandiso chayo. , ayo asiri mashoma chaizvo mukambani yakaita seiyi. Nenzira iyi, Apple ine huwandu hwakawanda hwezvigadzirwa zvakagadziridzwa munyika dzakaita seUnited States of America, uko vashandisi vasingade kubhadhara izvo yekupedzisira-mhanya modhi yemitengo vanoona tsinga yekupinda iyo iOS nyika mune dhizaini. Muenzaniso unogona kunge uriwo wakajairwa $ 7 iPhone 499 kubva kuApple Store Online.
Zvinoenderana nedatha kubva kuComputerpoint Kutsvagurudza, kutengeswa kwezvinhu zvakagadziridzwa zveApple kuri kukanganisa kutengeswa kwepakati-renji materu eApple., zvekuti pasirese kutengeswa kwerudzi urwu rwemaoko kwakura nezvikamu gumi nezvitatu kubva muzana mugore rapfuura 2017, munhu akakosha achifunga kuti musika wepasi rose wakangwara nharembozha wakamira zvishoma, zvichipa zero zero data rekukura. Kupinda mumisika irikubuda kuri kutora reef yerudzi urwu rwezviteshi zvakachipa zvishoma, uye kunyanya kuwedzera kwe Hardware mumakore achangopfuura izvo zvinoita kuti zvinyanye kukosha kuti uve "wazvino" kune wenguva dzose mushandisi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Noticias » Kutengeswa kwe iPhone "kugadziridzwa" kuri kuwedzera uye kunokanganisa zviteshi zveApple
Izvo zvinokanganisawo kutengeswa kwePhones nyowani asi zvaizodikanwa kuti uzive muzana muzana kuti kutengesa kwePhones nyowani senge I8 kana Ix kwadzikira.
Makuhwa anoti matatu mamodheru achaburitswa anotevera akakosha 3 saka ndinofunga ari kuvakanganisa
Apple Music inovhara rekodhi mwedzi wevanyori uye inosimbisa basa rayo